Mareykanka oo duqeymo ka geystay gobolka Jubbada Dhexe iyo warbixin ay kasoo saareen – Kismaayo24 News Agency
Mareykanka oo duqeymo ka geystay gobolka Jubbada Dhexe iyo warbixin ay kasoo saareen
by admin 1st December 2019 079
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika oo looyaqaano (AFRICOM) ayaa weerar dhanka cirka ah ka fuliyay gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jillib sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen AFRICOM.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaaliya in ay siwadajir ah howlgalkaas u fuliyeen isla markaasna ku bartilmaameedsadeen saraakiil sar sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa warbixintooda ku soo gaba gabeeyay in ay sii labba jibaari doonaan weerarada ay ka fulinayaan Soomaaliya ee ay ku bartilmaameedsanayaan Saraakiisha Alshabaab ilaa ay amaanka guud ee dalka ku wareejiyaan ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Amisom oo ka hadashay doorashada Soomaaliya iyo kaalinta ay ka qaadaneyso
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo Xil Cusub Magacaabay (Wareegto)
DEG DEG: Soomaliland oo Dagaal culus kusoo dhaweysay Farmaajo xili ay la wareegtay deegaan muhiim ah oo….
Dowlada Kenya oo Markale ku Caga jugleeysay in Darbiga ay ka dhiseyso Xadka ay la Wadaagto Soomaliya ay ku Dhameystiri doonto Mudo dhan…..